သံပြားနင်းဖူးတဲ့သင်္ဘောသားစစ်စစ် တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရွာပြန်နိုင်ပါစေ... ~ MSU Portal
6/06/2013 12:07:00 AM Navi Kyaw No comments
မနက် ၅း၃၀ ... သီရိလင်္ကာ ကိုလံဘိုလေဆိပ်
သီရီလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုလေဆိပ်ကို ရန်ကုန်အချိန် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန် သီရိလင်္ကာအချိန် ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာရောက်ပါတယ်
ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကို နောက်တစ်နေ့ညနေ သီရီလင်္ကာအချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲမှစီးရမှာမို့ လေကြောင်းလိုင်းကစီစဉ်ပေးတဲ့လေဆိပ်အပေါ်ထပ်က လေဆိပ်ဟိုတယ်မှာ တစ်ညအိပ်ရမှာပါ လေဆိပ်ဟိုတည်မှာ အိပ်မယ့််ခရီးသည်များတာကြောင့် အခန်းရအောင်တော်တော်စောင့်ရပါတယ်
လေဆိပ်ကိုရောက်တာ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်ကတည်းကဖြစ်ပေမယ့်လေဆိပ်မှာအိပ်ဖို့အခန်းရတော့ ညည့်နက်ပိုင်း ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ဖြစ်နေပါပြီ ဒီလိုနဲ့ပဲ မနက်မိုးလင်းတော့မှာမို့ ရေချိုးကိုယ်လက်သန့်စင်ကာ အိပ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ် အချိန်ကြည့်တော့ မနက် ၃ နာရီ ထိုးကာနီးနေပြီ အဖော်နှစ်ယောက်ကတော့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျနေလေရဲ့  အိပ်ယာပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်း အတွေးတွေများစွာနေရာယူနေတဲ့ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အိပ်မရတဲ့ထူးမခြားနားရက်တွေများစွာထဲက နေ့တစ်နေ့ထပ်တိုးပြန်ပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲက နေ့စဉ်ရေးနေကျဒိုင်ယာရီစာအုပ် ချစ်သူပေးလိုက်တဲ့မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအိပ်လေး ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ယူပြီး ဟိုတယ်အောက်ဖက်လေဆိပ်အဆောက်အဦးထဲကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်
ညည့်နက်ပိုင်းမို့တာဝန်ကျဝန်ထမ်းအချို့ နဲ့ ခရီးသည်ကျို့ တို့ကျဲတဲကလွဲရင်အရာအားလုံးကခြောက်ကပ်နေသလိုခံစားရပါတယ် လေဆိပ်အဆောက်အဦးထဲက အရောင်းဆိုင်တွေကို ဟိုဆိုင်လိုက်ကြည့်ဒီဆိုင်လိုက်ကြည့်နဲ့ အတွေးပေါင်းများစွာကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် အလွမ်းဆိုတဲ့စိတ်ကပဲအနိုင်ယူနေဆဲ အများသုံးကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ပေါ် တက် မျှော်လင့်တကြီးဘယ်သူနဲ့များတွေ့မလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်အကောင့်လေးဖွင့်ကြည့် တော့လည်းပဲဒီအချိန်က ရွာမှာဘယ်သူမှအင်တာနက်မသုံးလေတော့ စိတ်ညစ်ရုံကလွဲလို့အာရုံတွေကပြောင်းမရ ပိုသတိရမိနေတာကတစ်ဦးတည်းသောသက်ဆိုင်သူရယ်လေ သူဘာတွေများလုပ်နေမလဲ!ဘာတွေများတွေးနေမလဲ! ငါလိုပဲတွေးနေမလား! ရယ်လို့ အတွေးပေါင်းများစွာ လေဆိပ်အဆောက်အဦးသိပ်မကြီးပေမယ့် ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်လျှောက်နေတာ...
ဘယ်နှစ်ခေါက်မှန်းမသိတော့ ခြေလည်းအတော်ညောင်းပြီမို့ နာရီကြည့်မိတော့မနက် ၅ နာရီထိုးတော့မယ်ဆက်ြပီးတော့လည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ နောက်ဆုံးတော့အပေါ်ထပ်လေဆိပ်ဟိုတယ် ပေါ်ပြန်တက်လာမိတယ် ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းထဲမှာတော့ တာဝန်ကျဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလေးနှစ်ယောက်ကလွဲရင် လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေဆဲ အခန်းထဲကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်မိပြန်တော့ အဖော်နှစ်ယောက်ကအိပ်မောကျဆဲ ဒါနဲ့ပဲဟိုတည်ဧည့်ခန်းထဲကို ပြန်လာပြီး သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ကာ ဆိုဖာထိုင်ခုံပေါ်ကိုခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ်...
အတော်လေးကြာမှ ရေးနေကျဒိုင်ယာရီကိုဖွင့်လိုက်တော့ စာအုပ်ကြားမှာညှပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ချစ်သူပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်လေးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်နေမိသေးတယ် ပြီးမှ စာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်ပြီး ချစ်သူရေးတဲ့စာကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ဖတ်နေလိုက်မိတယ် နဂိုကတည်းရည်ရွယ်ထားသောခိုင်မာတဲ့ဘ၀တစ်ခုအတွက် ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြိုးစားဖြတ်ကျော်ရင်းရှုံးနိမ့်မှု့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကြောင့်ရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ၃ နှစ်နဲ့ ၇ အတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းခြင်းများစွာကြောင့် ယိုင်နဲ့နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာလက်တစ်စုံနဲ့တွဲကာကူညီဖေးမခဲ့တဲ့ ချစ်ရသူရေးထားတဲ့စာထဲကနှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့စာလုံးတွေ ဒိုင်ယာရီထဲက အမှတ်တရအကြောင်းအရာတွေပြန်ဖတ်မိပြီး လွမ်းမိတာတွေ အမျိုးစုံသောဝမ်းနည်းတဲ့ခံစားချက်တွေက ရင်ထဲကိုစုပြုံဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်...
ဒီတစ်ခါတော့မျက်ရည်ဝဲတက်လာတာကိုမျက်တောင်တဖြတ်ဖြတ်ခတ်လည်းမတားဆီးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ စာပွဲအလယ်က တစ်ရှူးဘူးထဲက တစ်ရှူးစာရွက်ကိုလှမ်းအဆွဲ ဘယ်ဘက်မျက်ဝန်းထဲကကျလာတဲ့မျက်ရည်စက်က ဖွင့်ထားတဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ပေါ်အတားအဆီးမဲ့စွာနဲ့ကျရောက်သွားခဲ့ပါတယ်...
မျက်လုံးအစုံကိုစုံမှိတ်ပြီး တစ်ရှူးစနှစ်ခုနဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားမိပေမယ့် ၀မ်းနည်းလို့ငိုရှိက်နေမိတဲ့အသံက ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးမှာတော်တော့်ကိုကျယ်လောင်နေမှာသေချာပါတယ် ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်တော့သတိမထားမိပါဘူး ငိုလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုလျော့သွားစေတာတော့အမှန်ပါပဲ ကိုယ်ငိုနေမိတာဧည့်ခန်းထဲမှာဆိုတဲ့အသိစိတ်ဝင်လာပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်တော့မှပဲ ဧည့်ကြိုကောင်တာက၀န်ထမ်းကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော့်အပြုအမူကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ရှက်စိတ်နဲ့အတူခေါင်းကိုညင်ညင်သာသာခါရမ်းကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ချက်ပြုံးရင်းရယ်လိုက်မိတယ်...
နာရီကြည့်မိတော့မနက် ၆ နာရီထိုးတော့မှာမို့ ဧည့်ခန်းမှန်ကိုကားထားတဲ့လိုက်ကာကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ အရှေ့ ဘက်ကအာရုံဦးနေထွက်စပြုနေပြီပဲ အော်ရွာမှာဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ဆို မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်တော့ရှိပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ နေထွက်စပြုနေတဲ့အမိမြန်မာပြည်ရှိရာအရပ်ကိုရည်စူးပြီးလေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းလိုက်မိတယ်...
“၁၀စုနှစ်တစ်ခုအတွက်အရှုံးတွေကို ချန်ရစ်ထားခဲ့နိုင်ဖို့ ချစ်ရသူတစ်ယောက်အမျှော်လင့်ဆုံးမျှော်လင့်နေမိတဲ့ နှစ်ယောက်ဘ၀ဆိုတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်လာဖို့ အောင်မြင်မှု့ တွေပိုက် အရာကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြတ်သန်းကာ သံပြားနင်းဖူးတဲ့သင်္ဘောသားစစ်စစ် တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရွာပြန်နိုင်ပါစေ”ဆိုတဲ့ဆုတောင်းလေးပေါ့……………………….
ရေးသားသူ - Aung Koko